बागलुङमा जिप दुर्घटना हुँदा एक वर्षीय छोरासहित आमाको मृत्यु , एक जना घाइते – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. बागलुङमा जिप दुर्घटना हुँदा एक वर्षीय छोरासहित आमाको मृत्यु , एक जना घाइते – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
बागलुङमा जिप दुर्घटना हुँदा एक वर्षीय छोरासहित आमाको मृत्यु , एक जना घाइते
८ मंसिर, बागलुङ । बागलुङमा जिप दुर्घटना हुँदा एक वर्षीय छोरासहित आमाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन्।
बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा सोमबार बिहान जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । ग्वालिचौरतर्फ जाँदै गरेको लु १ द ४३७० नम्बरको जिप बडिगाड–६ सुरखुरेमा दुर्घटना हुँदा अन्दाजी २२ वर्षीया टेकमाया रोका र उनको एक वर्षीय छोराको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा अन्दाजी ६० वर्षीया मनकुमारी रोका घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङ प्रहरीचौकीका इञ्चार्ज प्रकाशसिंह भण्डारीले जानकारी दिए । प्रहरी निरीक्षक भण्डारीका अनुसार जिपमा सामान लाद्ने क्रममा गुडेर जिप दुर्घटना भएको हो । उद्धारका लागि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको छ । चालक रविलाल बुढाले सामान लाद्ने क्रममा जिप अचानक गुडेको थियो । चालक भने सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको November 23, 2020 November 24, 2020 135 Viewed